Ministeera Dhimma Alaa: Somaaliyaa qaama Itoophiyaa gochuun kaartaa mul'ise namni maxxanse ni gaafatama - BBC News Afaan Oromoo
Ministeera Dhimma Alaa: Somaaliyaa qaama Itoophiyaa gochuun kaartaa mul'ise namni maxxanse ni gaafatama
Kaartaa Afriikaa dogongoraa Caamsaa 17 websaayitii isaaratti maxxanfame irratti qorannoo taasisaa akka jiru ministeerri dhimma alaa himeera.
Kaartaan Afriikaa Somaaliyaa qaama bulchiinsaa Itoophiyaa akkasumas Somaalilaand immoo biyya of dandeesse gochuun agarsiisu weebsaayitii ministeerichaa irratti maxxanfamunsaa muufii guddaa uumee jira.
Dhimmicha irratti har'a ibsa kan Kennan dubbi himaan ministeera dhimma alaa Obbo Nabiyaat Getaachaw "akkuma gabaasni nu qaqqabe kaarticha websaayitiirraa buusnerra" jedhan.
"Kaartichi eenyu fi akkamiin akka maxxanfame qoratamaa jira" jechuunis himaniiru.
Ministeerri Dhimma Alaa Itoophiyaa dhiifama gaafate
Dabalataan Obbo Nabiyaat yeroo qaamni kaarticha maxxanse beekkamettis tarkaanfiin barbaachisu akka fudhatamu himan.
Itoophiyaan walitti dhufeenya diplomaasii irratti keessattuu biyyoota ollaaf xiyyeeffannoo guddaa laatti kan jedhan Obbo Nabiyaat Getaachaw ministeerichi dhimmicha jabinaan akka ilaalus dubbatan.
Kaartaan Ministeerichi itti fayyadamu dhaabbilee biyya keessaa fi idil addunyaa kaartaawwan waaltawaa ta'an omishanin kan hojjetame akka ta'es ibsaniiru.
Dogongora uummamef ministeerichi dhiifama ni gaafata kan jedhan dubbi himaan ministeera dhimma alaa kun ministeerichi dhaabbilee mootummaa odeeffannoo gama marsariitii(Website) kennuun isaan jalqabaa ta'an keessaa akka ta'e himan.
Gama kaaniin lammiilee Itoophiyaa biyya Yaman magaalaa Edanitti argamaniin walqabatee lammiileen 2000 ol ta'an achitti dahatanii kan turan yoo ta'u, har'arraa eegalee torbee lamaan itti aananif guyyaa
guyyaan balaliinsa lama taasisuun gara biyyaa ni deebi'u jedhan.
Har'as lammiileen 134 sa'aa 7 irratti gara biyyaa akka seenanis ibsaniiru.
MM Abiy Ahimad pireezidantoota Somaaliyaa fi Keeniyaa 'araarsan'